26 / 07 / 2021 26 / 07 / 2021 ခရစ် Wharfe 630 Views စာ0မှတ်ချက် အသက် 71029 စီးရီး 21, 71030 Looney တီးလုံး, 71031 Marvel စတူဒီယို, စုဆောင်းထားသောအသေးစား, Disney+, Lego, Lego စုဆောင်းထားသောအသေးစား, Lego မှ marvel, Lego Marvel စုဆောင်းထားသောအသေးစား, Lego Minifigures, LEGO.com, Loki, Marvel, သေးသေးလေး, အဆိုပါစွန်ငှက်နှင့်ဆောင်းရာသီ Soldier, WandaVision, တကယ်လို့ ... ဘာဖြစ်မလဲ...?
နောက်ဆုံးထုတ်စီးရီး စုဆောင်းထားသောအသေးစား ယခုစာရင်းသွင်းထားသည် LEGO.com တစ်ကမ္ဘာလုံးတွင်ကမ္ဘာ့စျေးနှုန်းများနှင့်ဖြန့်ချိမည့်ရက်ကိုအတည်ပြုသည် 71031 Marvel စတူဒီယို.
ဇာတ်ကောင် ၁၂ လုံးပါ ၀ င်သောဇာတ်ကောင်များ - ပထမစာလုံးကိုရေးဆွဲထားခြင်းဖြစ်သည် Disney+ Marvel WandaVision, The Falcon နှင့် Winter Soldier, Loki နှင့် What If …တို့၏ပြပွဲများ၊ - စက်တင်ဘာ ၁ ရက်တွင်တရားဝင်မှတစ်ဆင့်နယ်မြေအားလုံးတွင်ပွဲထုတ်မည်ဖြစ်သည် Lego လိုင်းများ။ အတိတ်နှင့်အမျှ စုဆောင်းထားသောအသေးစား လွှတ်တင်ပြီးမကြာမီမှာပင်၎င်းတို့သည်အခြားလက်လီအရောင်းဆိုင်များတွင် (သို့မဟုတ်ပင်ပင်) တွင်ပေါ်လာလိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ကြသည် အနည်းငယ်ကြိုတင်ပြီး).
As ယခင်ကအစီရင်ခံတင်ပြ, 71031 Marvel စတူဒီယို 2021 ၏အခြားမျက်စိကန်းသောအိတ်ကိုလိုင်း -ups နောက်သို့ပါလိမ့်မယ် အသက် 71029 စီးရီး 21 နှင့် 71030 Looney တီးလုံး US ရှိဇာတ်ကောင်တစ် ဦး လျှင် $ 4.99 များအတွက်လက်လီရောင်းချခြင်းဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။ အဆိုပါအသေးစားဓာတ်ပုံများယခုစာရင်းဝင်နေကြသည် LEGO.com ယူကေနှင့်ဥရောပတို့တွင်မူအသေးစားရုပ်ပုံများအတွက်ကုန်ကျစရိတ်သည်ထိုဒေသများတွင်မပြောင်းလဲဘဲရှိနေမည်ကိုအတည်ပြုသည်။
ဆိုလိုတာကတစ်ခုတည်း 71031 Marvel စတူဒီယို minifigure သည်ယူကေတွင်ပေါင် ၃.၄၉ နှင့်ဥရောပတွင်ယူရို ၃.၉၉ မှရောင်းချမည်ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် ၁၂ ခုလုံးကိုစုဆောင်းခြင်းသည်သင့်အားပေါင် ၄၁.၈၈ / ဒေါ်လာ ၅၉.၈၈ / ယူရို ၄၇.၈၈ ဒေါ်လာအမြောက်အများပြန်ပေးလိမ့်မည်။ သင်သည်မည်သည့်ပုံတူပွားများနှင့်အဆုံးသတ်မည်မဟုတ်ပါ။
Captain America, Loki, Zombie Hunter Spidey နှင့်ကျန်အဖွဲ့သားများ၏ပုံများကိုပိုမိုကြည့်ရှုပါ ဒီနေရာမှာကိုနှိပ်ခြင်းနှင့်တခုတခုအပေါ်မှာမျက်စိစောင့်ရှောက်လော့ Brick Fanatics ၌ရှိသမျှသောအသေးစားဓာတ်ပုံများအပေါ်ငါတို့၏အသေးစိတ်စီရင်ချက်အတွက်လာမည့်လတွင် 71031 Marvel စတူဒီယို.
← အဆိုပါ Lego Marvel Collectible Minifigures သည်အယူအဆမျှသာမဟုတ်ပါ art
အဘယ်ကြောင့် LEGO ၏စုဆောင်းထားသော Minifigures သူတို့ရဲ့ပုံမှန်အသေးစားဓာတ်ပုံများထက်ပို။ အသေးစိတ်ဖြစ်ကြသည် →